အပိုဆုကြာသပတေးနေ့ SPINS | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! အပိုဆုကြာသပတေးနေ့ SPINS | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
Min dep £10 for 15 လှည့်ခြင်းများ, or Min dep £20 for 40 လှည့်ခြင်းများ, Max bonus 40 လှည့်ခြင်းများ, Dead or Alive only, 3တတိယအကြိမ်မြောက်, 10ကြိမ်မြောက်, 17ကြိမ်မြောက်, 24ကြိမ်မြောက်, 31st August, 1st deposit only, 30x ကအာမခံ, 4x Cap. Full T&Cs apply
သြဂုတ်လအတွင်းကတိုင်းကြာသပတေးနေ့, အပေါက် Fruity မှာအချို့ကောင်းတဲ့ပျော်စရာရှိသည်ဖို့အချိန်က. သင်တစ်ဦးသေ၏ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သို့မဟုတ်အသကျရှငျ slot ကဂိမ်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ကပင်ပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့. ယခုသင်ဖွင့်ခံစားနိုငျသောကွောငျ့ဤအဒါဖြစ်ပါသည် 40 ယင်းအပေါက် Fruity ကာစီနိုမှာဒီ slot ကဂိမ်းအပေါ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. ဘယ်လိုလဲ? အသေးစိတ်သိရန်အပေါ် Read.
ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုပေးသော်လည်းဖို့, သငျသညျအထကျ£ 10 သို့မဟုတ်ငွေသွင်းရန်လိုအပ်သည်. £ 19 တစ်သိုက်မှတက်, သငျသညျဝင်ငွေရ 20 ဆုကြေးငွေ spins နှင့်အထက်£ 20 သို့မဟုတ်တစ်သိုက်အပေါ်, သငျသညျဝင်ငွေ 40 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. သင်ပြုရန်ရှိသည်ဤသူအပေါင်းတို့သည်လှည့်ခြင်းများကိုသက်ဝင်စေဖို့ Dead or Alive slot ကဂိမ်းကိုဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်.
သို့သော်ဤမြှင့်တင်ရေး availing မတိုင်မီ, တစ်ဦးတည်းသာဆုကြေးငွေတစ်ကြိမ်တက်ကြွစေနိုင်သည်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့. ဒါကြောင့်သင်မဆိုအခြားဆုကြေးငွေရှိပါက, ဒီတစ်ခုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူမီသူတွေကိုသုံးစွဲဖို့သေချာကျေးဇူးပြုပြီး. သတိရ, ဤအလွတ်လှည့်ခြင်းများကနေဖန်ဆင်းတော်အနိုင်ရရှိတဲ့အတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံမတိုင်မီဆုတ်ခွာမရနိုငျသော. ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုမီအသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများဖတ်ရှုဖို့အချို့သောအချိန်ဖြုန်း ကျေးဇူးပြု.. လည်း, ဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေများအတွင်းအသုံးပြုသင့် 28 အဆိုပါဆုချီးမြှင့်သည့်ရက်စွဲ၏ရက်ပေါင်း. ဤကာလပြီးနောက်, ဤအတစ်ချုံးကြလိမ့်မည်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့မသုံးလို့ရပါတယ်.